Federighi nilaza fa ny Windows amin'ny Macs misy M1 dia miankina amin'ny Microsoft | Avy amin'ny mac aho
Federighi Milaza ny Windows Native ao amin'ny M1 Macs miankina amin'ny Microsoft
Craig Federighi dia nanome toky tamin'ny resadresaka nifanaovana fa ny fihazakazahana Windows amin'ny Mac misy M1 dia miankina amin'i Microsoft ihany. Nanodinkodina anay izy io. Apple dia tsy ho ratsy mihitsy raha toa ka ampifanarahan'ny Microsoft amin'ny Windows prosesor ny Windows ARM. Mety ho sanda fanampiny ho an'ny Apple Silicon. Iray indray.
Satria tsy vitsy ireo mpampiasa Mac izay noho ny antony sasany na hafa mampiasa ny asany Kiraro Camp ary mihazakazaka Windows miaraka amin'ny macOS amin'ny solosain'izy ireo izy ireo. Indrindra amin'ireo izay mandefa telecommute, ary ny rindrambaiko an'ny orinasanao dia tsy mifanaraka afa-tsy amin'i Microsoft ihany.
Rehefa misy sarimihetsika vaovao navoaka tao Hollywwod, matetika ireo mpilalao sy ny talen'ny dia mandalo amin'ny haino aman-jery manadihady momba ny kisoa. Ankehitriny zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'ny lohan'i Cupertino, taorian'ny premiere an'ny Apple Silicon. Ars Technica vao namoaka tafatafa iray hafa niaraka tamin'ny Chief Software Engineering Craig Federighi, ny Hardware Technologies Leader Johny Srouji, ary ny filoha lefitry ny Marketing Greg Joswiak.
Samy tsy nanohitra ny Boot Camp na Apple na Microsoft. Mandresy, hoy izy ireo.
Ny ankamaroan'ny resadresaka dia niresaka momba izay fantatsika rehetra momba ireo fiasa vaovao an'ny Mac Silicon Apple, fa misy pitsopitsony mahaliana avy amin'i Federighi momba ny Microsoft sy ny Windows ao amin'ny Mac M1. Amin'izao fotoana izao, ny Mac M1 dia tsy mifanaraka amin'ny Windows ary tsy misy asan'ny Boot Camp satria misy ao amin'ny Intel Macs, ary ny tena izy dia ny fanohanana an'i Windows dia endrika iray izay maniry hahita ny maro amin'ireo Apple Silicon Macs vaovao.
Federighi dia naneho hevitra tamin'io tafatafa io Windows amin'ny M1 Mac dia miankina amin'i Microsoft ihany izany. Misy ny haitao Core ary mahavita azy ny Macs, saingy tsy maintsy manapa-kevitra i Microsoft raha hanome fahazoan-dàlana ny kinova Windows-based Windows an'ny mpampiasa Mac.
Mikasika ny fahafahan'ny Windows mihazakazaka an-tanindrazana amin'ny M1, "tena miankina amin'ny Microsoft", Hoy izy. Nanampy izy hoe: "Manana ny teknolojia hanaovana an'izany izahay, mba hampandehanana ny kinova ARM an'ny Windows, izay mazava ho azy, dia manohana ny fampiharana fampiasa-x86 ho an'ny mpampiasa. Fa izany no fanapahan-kevitra tsy maintsy raisin'i Microsoft, ny fahazoan-dàlana hampiasa io teknolojia io hahafahan'ny mpampiasa mampiasa azy amin'ny Macs ireo. Fa ny Mac kosa tena mahay an'io. "
Nofaranany ity lohahevitra ity tamin'ny filazany fa ny Windows amin'ny rahona dia mety ho vahaolana mety amin'ny ho avy, ary nanasongadina ny CrossOver, izay afaka mihazakazaka fampiharana x86 Windows amin'ny M1 Macs mampiasa Rosetta 2. Azoko antoka fa hanaiky izany i Apple sy i Microsoft. Microsoft dia nandeha lavitra tamin'ny fananana azy Office teratany M1 vonona, noho izany dia te hivarotra lisansa an'arivony vitsivitsy amin'ny Windows ARM mifanaraka amin'ny processeur vaovao an'ny Apple ianao. Raha tsy izany, amin'ny fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Bootcamp » Federighi Milaza ny Windows Native ao amin'ny M1 Macs miankina amin'ny Microsoft
Nanodinkodina anay izany! Izay no fanontaniana. Ary farany ary manoloana ny tsy fahazoana antoka dia nanapa-kevitra ny hamerina ny Mac vaovao miaraka amin'ny M1 aho satria tsy ho fantatro raha afaka mihazakazaka Windows ao aminy aho. Eny ... fantatsika fa ny fitovizan-toetra dia mizaha toetra, fa eo ny olan'ny fahazoan-dàlana.
Raha fintinina, raha mankany amin'ny fantsona iasan'ny mpampiasa tsara kokoa ny rano, tsara… fa… miandry!
Toni Cortes dia hoy izy:
Oysters, mila mila Windows be dia be ianao hamerenana ny Mac ary tsy hiandry vahaolana. Manantena aho fa hivoaka tsy ho ela izy io ary afaka manafatra azy indray ianao.
Valiny tamin'i Toni Cortes
Ny GPU an'ny M1, tahiry Apple amin'ny M1 ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
iFixit dia mampiseho amintsika ny fidirana amin'ny MacBook Air sy MacBook Pro miaraka amin'ny M1